Araka ny angom-baovao, tsy nisy vola mihitsy tao amin’ilay tokantrano, afak’omaly alina. Tonga avy any anefa ilay lehilahy nikirakira vola teo imason-dravehivavy ary tsy nanome azy mihitsy. Nakan-dravehivavy 2 000 ariary izany ary nofihininy mafy tao anatin’ny tanany. Fara herin-dralehilahy dia nokekeriny ny tanan’ny vadiny sady nomeny ny kotro-doha. Nentim-po ka naka antsy ilay vehivavy ka naratra ny sandrin’ny vadiny. Efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy izy ary tsy misy ahiana ny ainy, raha ny filazan’ny polisy. Voalazan’ireo manodidina moa fa efa mpivady tia ady izy roa ireto. Amin’ny fotoana tsy fisian’ny vola ao an-tokatrano matetika no itrangan’ny ady toy izao. Voalaza koa fa tsy misy mpananatra izy ireo ka samy manao izay saim-pantany ary izao niafara tamin’ny fifandratrana izao. Mampametram-panontaniana ny fampideran’ilay lehilahy vola kanefa ilay renim-pianakaviana sahirana tsy manan-karotsaka.Tsapa ho miha mahery setra ny vehivavy Malagasy ankehitriny, ary maro no tsy manaiky sokajiana ho fanaka malemy izany intsony ; voizina mafy koa moa ny resaka miralenta efa ho 10 taona mahery izao, ka mety ho izay koa ve no mahatonga ny vehivavy tena midaroka sy sahy mamono mahafaty mihitsy ?